Dayax - Wikipedia
Kani waa maqaal ku saabsan Dayax. adeegsi kale, eeg Dayax (faah faahin).
Dayax (ingiriis: Moon) waa aduunyo yar oo ku wareegta Meere ama wax ka ween dayaxa. Ugu yaraan, meere kasta wuxuu leeyahay hal daya x ama in ka badan.
Dayaxu waa duni yar oo ka 1. Jecaylka 1. Jecaylka dabiiciga: jacaylka dabiiciga ah waa kan qofku u hayo waalidkiis ama waalidku u hayo ilmahiisa. Intaas waxaa dheer, jecaylkan waa kan qofku u qaado cibaadada Alle, diinta nebiga ama nebiyada iyo wixii la hal maala. Jecaylka noocan ahi waa mid dabiici ah oo qofka ku abuurma wakhtiga dhalashada ilaa inta uu ka dhimanaayo, inkastoo jacaylka waalidku bilaabmo wakhtiga ugu horeeya nolosha qofka. 2. Saaxiibtinimo: jacayl caadi ah oo qofku u qaado asxaabtiisa, walaalihiis, xaaska ama seyga, sheey, marxalad iwm. Jecaylka noocan ahi waa mid degan oo ku salaysan ixtiraam, qadarin, sharaf iyo wanaag la doon. Sida caadiga ah qofku 1. Jecaylka dabiiciga: jacaylka dabiiciga ah waa kan qofku u hayo waalidkiis ama waalidku u hayo ilmahiisa. Intaas waxaa dheer, jecaylkan waa kan qofku u qaado cibaadada Alle, diinta nebiga ama nebiyada iyo wixii la hal maala. Jecaylka noocan ahi waa mid dabiici ah oo qofka ku abuurma wakhtiga dhalashada ilaa inta uu ka dhimanaayo, inkastoo jacaylka waalidku bilaabmo wakhtiga ugu horeeya nolosha qofka. 2. Saaxiibtinimo: jacayl caadi ah oo qofku u qaado asxaabtiisa, walaalihiis, xaaska ama seyga, sheey, marxalad iwm. Jecaylka noocan ahi waa mid degan oo ku salaysan ixtiraam, qadarin, sharaf iyo wanaag la doon. Sida caadiga ah qofku wuxuu bilaabaa jecaylkan wakhtiga uu qaangaadhka gaadho ama ku dhow yahay ee garaadkiisu inta u badan dhamaystiran yahay. bilaabaa jecaylkan wakhtiga uu qaangaadhka gaadho ama ku dhow yahay ee garaadkiisu inta u badan dhamaystiran yahay.: jacaylka dabiiciga ah waa kan qofku u hayo waalidkiis ama waalidku u hayo ilmahiisa. Intaas waxaa dheer, jecaylkan waa kan qofku u qaado cibaadada Alle, diinta nebiga ama nebiyada iyo wixii la hal maala. Jecaylka noocan ahi waa mid dabiici ah oo qofka ku abuurma wakhtiga dhalashada ilaa inta uu ka dhimanaayo, inkastoo jacaylka waalidku bilaabmo wakhtiga ugu horeeya nolosha qofka. 2. Saaxiibtinimo: jacayl caadi ah oo qofku u qaado asxaabtiisa, walaalihiis, xaaska ama seyga, sheey, marxalad iwm. Jecaylka noocan ahi waa mid degan oo ku salaysan ixtiraam, qadarin, sharaf iyo wanaag la doon. Sida caadiga ah qofku wuxuu bilaabaa jecaylkan wakhtiga uu qaangaadhka gaadho ama ku dhow yahay ee garaadkiisu inta u badan dhamaystiran yahay.amaysan dhagaxaan, kuna wareegta dhulka, taas oo leh dherer dhan rubuc gacanka dhulka. Dayaxa dhulku waa kan ugu weeyn dhamaan dayaxyada meereyaasha Bahda Midaysay Qoraxdu laba odhan karo wuxuu ka wayn yahay meereyaasha yaryar qaarkood. Cufis-jiidadka u dhexeeya dhulka iyo dayaxa ayaa keena mowjadaha badaha, taas mi la mid ah ayaa keentay isku-xidhnaanshaha labadooda.
Dayaxa oo ku socda xawaare dhan 1.022 kilomitir ilbiriqsigiiba, ayaa waxay ku qaadataa 27 maalmood, 7 saacadood iyo 43 daqiiqo in uu hal mar ku wareego dhulka.
Dhinaca kale, isku wareega dayaxu (circumference) waa 10, 921 km; cufkiisuna waa 2.1958 ×
1022 kg. Maadaama dayaxa cirkiisu aad u khafiif yahay falaadhaha qoraxduna toos u soo taabtaan oogada dayaxa ayaa heerkulkiisu aad u sareeyaa ugu yaraan waa 100 Kalfin ugu badnaana wuxuu gaadhaa 390 K.
1 Qaabdhismeedka Dayaxa
2 Bahda Qoraxdu Midaysay
3 Liiska Dayax ee Meerayasha
3.1 Dayaxa Farraare
3.2 Dayaxa Cirjeex
3.3 Dayaxa Raage
3.4 Dayaxa Uraano
3.5 Dayaxa Docay
3.6 Dayaxyada Bluto
Jidhka dayaxu wuxuu ka samaysan yahay iskudhisyo kala duwan kuwaas oo u badan curiyeyaasha kala ah: Argon, Hiliyaam, Sodhiyaam, Botashiyaam, Haydarojiin iyo Raadon.
Markii ugu horeeysay taariikhda bani-aadamka, sanadkii 1959kii ayaa Dayax Gacmeed Ruushku leeyahay tagay dayaxa. Ka dib, 1968dii ayaa qofkii ugu horeeyay cagaha saaray dayaxa kaas oo ka socday Dawladda Maraykanka. Sanadkii 2004 wixii ka dambeeyay ayaa wadanada Jabaan, Hindiya, Shiinaha iyo Yurub saldhigyo ka sameeysteen dayaxa.
Inkasto dayaxu lahayn cir sare oo ka difaaca kulka qoraxda, cilmi baadhis la sameeyay waxay muujisay in dayaxu leeyahay biyo laga heli karo cidhifyada dayaxa iyo oogada sare dhexdeeda.
Bahda Qoraxdu MidaysayEdit
Dayaxa meere waa duni yar oo ka samaysan dhagaxaan, neef iyo isku dhisyo kale taasi oo ku wareegta meere. Tusaale ahaan, dayaxa meeraha dhulka. Waxaa jira 173 dayax oo ku meeraysta meerayaasha Bahda Qoraxdu Midaysay, iyo sideed kale oo ku wareega dunida yaryar. Meereyaasha Waxaraxir iyo Dusaa ma lahan wax dayax ah, Dhulku wuxuu leeyahay hal dayax, meeraha afaraad Farraare wuxuu leeyahay labo dayax oo kala ah Fobos (Phobos) iyo Dheymos (Deimos).
Neefaha Waawayn waxay leeyihiin tiro badan oo dayaxyo ah, kuwaas oo qaarkood le'eg yihiin xajmiga dayaxa dhulka; qaar kalena kaba wayn yihiin meerayaasha, sida dayaxa Raage ee Titan wuu ka xajmi weyn yahay meeraha Dusaa. Meeraha Cirjeex waa kan leh tirada ugu badan daxayada ee Bahda Qoraxdu Midaysay, wuxuuna leeyahay 67 dayax. Waxaa ku xiga meeraha Raage oo leh tirada labaad ee ugu badan dhamaan sideeda meere ee bahda qoraxdu midaysay kuwaas oo ah 62 dayax. Dhinaca kale, meeraha Uraano wuxuu leeyahay tirada sadexaad ee ugu badan bahda qoraxdu midaysay kuwaas oo dhan 27 dayax. Meeraha Docay wuxuu leeyahay 14 dayax.
Si kastaba ha ahaatee, duunyooyinka yar qaar ka mid ah waxay leeyihiin dayaxyo yaryar oo ku wareega ayaga. Dunida yar ee Ceres ma lahan wax dayax ah, laakiin dunida yar ee Bluto waxay 5 dayax oo wareega. Sidoo kale, dunida yar ee Haumea waxay leedahay 2 dayax, waxaa iyadna hal dayax leh dunida yar ee Eris.
Waxaa la aaminsan yahay in dayaxyada qaar ay ka jirto nolol, sida dayaxa Titan ee Cirjeex iyo bisha Triton ee meeraha Docay, laakiin lama hubo ineey jirto midaasi.
Liiska Dayax ee MeerayashaEdit
Meereyaasha Bahda Midaysay Qoraxdu iyo bilahooda
[[File:Full moon partially
obscured by atmosphere.jpg|thumb|Dayaxa Dhulka oo si buuxda looga arko Oogada sare ee cirka.]]
Dusaa (Bil malahan)
Waxaraxir (Bil malahan)
Aduunka (1 bil
Farraare 2 bilood
Cirjeex 67 bilood
Raage 62 bilood
Uraano 27 dayax.
Docay 14 dayax.
Dunidayar ee sidoo kale oo bilooyin leh waxaa ka mid ah:
Bluto 5 dayax
Eris (1 bil)
Meereha Cirjeex waa kan leh tirada ugu badan daxayada ee Bahda Qoraxdu Midaysay, wuxuuna leeyahay 67 dayax.
Tirada dayaxyada ee meerahan Cirjeex aad ayay u badan tahay, dhamaantoodna aqoon fiican looma laha, laakiin kuwa ugu caansan waxaa ka mid ah:
Meereha Raage waa kan labaad ee leh tirada ugu badan daxayada ee Bahda Qoraxdu Midaysay, wuxuuna leeyahay 62 dayax. Tirada dayaxyada ee meerahan Raage aad ayay u badan tahay, dhamaantoodna aqoon fiican looma laha, laakiin kuwa ugu caansan waxaa ka mid ah:
Meereha Uraano (Uranus) wuxuu leeyahay tirada sadexaad ee ugu badan bahda qoraxdu midaysay kuwaas oo dhan 27 dayax.
Meerahan Uraano wuxuu leeyahay tiro badan oo dayaxyo ah, kuwaas waxaa ugu caansan:
Meereha Docay<re>Docay (Neptune) wuxuu leeyahay tirada afaraad ee ugu badan Bahda Qoraxdu Midaysay</ref> (Neptune) wuxuu leeyahay tirada afaraad ee ugu badan Bahda Qoraxdu Midaysay kuwaas oo dhan 14 dayax.
Meerahan Docay wuxuu leeyahay tiro badan oo dayaxyo ah, kuwaas waxaa ugu caansan:
↑ 173 dayax oo ku wareega meereyaasha Bahda Qoraxdu Midaysay, iyo sideed kale oo ku wareega dunida yaryar
↑ "Titan wuu ka xajmi weyn yahay meeraha Dusaa."
↑ Ceres ma lahan wax dayax ah
↑ Bluto waxay 5 dayax oo wareega.
↑ Raage waa kan labaad ee leh tirada ugu badan daxayada ee Bahda Qoraxdu Midaysay
↑ Uraano (Uranus) wuxuu leeyahay tirada sadexaad ee ugu badan bahda qoraxdu midaysay
↑ "Bluto oo wakhtiyadii hore loo aqoonsanaa ineey tahay meeraha 9aad"
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Dayax&oldid=234025"
Last edited on 9 Abriil 2022, at 08:07
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 9 Abriil 2022, marka ee eheed 08:07.